အစ္စရေးအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံရုံးသို့မတင်ရန် ကနေဒါမှ ပါလက်စတိုင်းကို သတိပေး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on March 8, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ငါတို့ဟာ ကမ္ဘာအိမ်ထောင်စုကြီးမှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ညီကိုအရင်းတွေပါ။	7Day News သူရဲကောင်းဆုရှင် အဖြစ် ဦးဌေးနိုင် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရ →